‘युद्ध छाडेका छैनौं…जनसेनाको स‌ख्या बढायौ‌‌’; प्रचन्ड | Wagle Street Journal
‘युद्ध छाडेका छैनौं…जनसेनाको स‌ख्या बढायौ‌‌’; प्रचन्ड
(माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना सेनाको तेस्रो डिभिजनले २०६४ पुस १८ गते आयोजना गरेको भेलामा कमान्डरहरूलाई प्रशिक्षणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश । यो भाषणको भिडीयो अस्ती साँझ इमेज च्यानलमा पहिलो पटक प्रसारण भएको थियो । हिजो दिनभरी नै नेपाली टीभी च्यानलहरुले प्रसारित गरेको भिडियोलाई माओवादीले ‘पुरानो र अप्रासंगिक’ भनेको छ । ‘आन्तरिक पार्टी पंक्तिलाई संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियामा आश्वस्त पार्न दिएको शान्तिवार्ता कालको पुरानो अप्रासंगिक फाइल टेपलाई विशेष भिडियो टेपको हवाला दिँदै प्रसारण गरेको कुराले हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शर्माले ‘नागरिक सर्वोच्चता नचाहने तत्त्वहरूले भिडियो वितरण गरेको’ दाबी गरेका छन् । ‘यो वर्तमान संकटपूर्ण राजनीतिक स्थितिलाई उत्तेजक र शान्ति प्रक्रियालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रपूर्ण चालबाजी भएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले शान्ति सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सेना समायोजन, जनमुखी संविधान लेखन, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक मान्यतामा स्पष्ट भएको जनाएका छन् । ‘यस प्रकारका असान्दर्भिक, उत्तेजक, समग्र शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक प्रक्रियालाई समाप्त पार्ने प्रकारका प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भनेका छन् ।)
मैलै विविध (कालिबहादुर खाम) सँग किन यस बेला यो प्रशिक्षण राखेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि राखेको भए पनि हुने भनेर भनेको थिएँ । तर, तपाईंहरूको रिपोर्टिङ महत्त्वपूर्ण नै लाग्यो । हामी अहिले नेपाली क्रान्तिको मात्र होइन विश्व क्रान्तिकै महत्त्वपूर्ण नयाँ प्रयोगको चरणमा छौं । हामीले गर्न खोजेका प्रयोग पार्टी, जनमुक्ति सेना र देशसँग मात्र सीमित छैन । यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । विश्वको सबैभन्दा अगाडि बढेको क्रान्तिकारी पार्टीको नाताले पनि हाम्रा प्रश्नहरू सार्वभौम हुँदै जान थालेका छन् ।
तपाइर्ंहरू एक वर्षदेखि शिविरमा केन्दि्रत भएर रहनुभएको छ । तर, विचार र सोचाइ एक ठाउँमा छैन । पाँचौ‌ विस्तारित बैठकको कार्यदिशा सशस्त्र विद्रोह थियो तर पार्टी सम्झौतातिर गयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामी अझै पनि रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा छौं । हामीले युद्ध छाडेका छैनौ । कूटनीतिक भाषामा दुश्मनसँग के के कुरा गर्‍यौं त्यो छाडिदिनुस् । हामी रणनीतिक रक्षा, सन्तुलन हुँदै प्रत्याक्रमणमा पुगिसकेका छौँ । त्यसैभित्र अहिले हामी घुमघुमाउ कार्यनीतिमा छौं । यसको उद्देश्य प्रत्याक्रमण नौलो तरिकाबाट सफल बनाउनु हो ।
साथीहरूले केन्द्रबाट योजना आएन, हतियार झिकेर आक्रमण गरौं कि भन्ने जस्ता कुरा गरिरहेका छन् । विद्रोह गर्ने भनेको थियो । मंसिरमा हुन्छ कि भनेको फेरि पार्टीले चुनावमा जाने कुरा पो गर्‍यो भन्ने पनि लाग्दो हो । यो हाम्रो समग्र सोचाइसँग सम्बन्धित छ । दीर्घकालीन जनयुद्धकै कार्यबाट जाने एउटा शैली हुन्छ । हामीले दीर्घकालीन जनयुद्धमा आम सशस्त्र विद्रोहको फ्युजन चाहेका हौं ।
सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशामा शान्तिपूर्ण संघर्ष पनि हुन्छ । अन्त्यमा आम विद्रोह हुन्छ । हामीले मौलिक फौजी कार्यदिशा बनाएका छौं । साथीहरू अहिलेको मात्र रूप हेरेर थाकेजस्तो खत्तम भयौं कि भन्ने गर्छन् । हामी तयारीमा छौं ।
लेनिनले सशस्त्र विद्रोहको रणनीतिअनुसार लामो समय शान्तिपूर्ण संघर्ष गरे र दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जतासुकै संकट भएको बेलामा सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरेका थिए । लामो शान्तिपूर्ण संघर्ष र थोरै सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ । संविधानसभा भनेर वार्तामा आउनुको कारण पनि यही हो ।
पार्टी कहिले अमेरिका, भारत, कांग्रेसको पछि लाग्यो भनिन्छ । यो नबुझेको मात्र हो । यो घुमघुमाउको बाटो हो । सीधा हिँड्छु भन्ने संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टी सकिए, क्रान्ति सकियो । करोडौं मरे । बलिदानी धेरै भयो, सिद्धियो ।
अहिले पनि हामी प्रत्याक्रमणको तयारी नै गरिरहेका छौं । अहिले पार्टीले अपनाएको कार्यनीति अति महान् छ । क्रान्तिलाई सफलतामा पुयाउनका लागि जोखिमयुक्त कार्यनीतिमा हामी छौं । शिविरमा तपाइर्ंहरू नभएको भए उनीहरूले कु गरिसक्थे । बीपीले पनि भनेका थिए । ५ सय मात्र मुक्ति सेना भएका भए, महेन्द्रले कु गर्न सक्दैनथ्यो । अहिले हामीसँग हजारौंका संख्यामा जनमुक्ति सेना छन् । त्यसैले कु गर्न सकेका छैनन् । तपाइहरूले तपस्या गरेर क्रान्तिका लागि बसिरहनुभएको छ । यो सधैँ हुनेवाला छैन । अलिकति लम्बिएको मात्र हो । अब केही महिनामात्र हो । या उता, या एता भइसक्छ ।
देशभित्र बाहिर वैचारिक रूपमा हामीले हमला गरेका छौं । तपाइर्ंहरू नभएको भए हस्तक्षेप ‘कौन पुछे खेसरीका दाल’ भने जस्तै हुन्थ्यो । कसैले मान्ने वाला थिएन । सेना छ भनेपछि सात्तो जान्छ । उनीहरूले नभनेका मात्र हुन् । उनीहरूमा आतंक छ । उताका (नेपाली) सेनाको पनि जनरलहरूसँग, मुख्य मुख्य भन्नेहरूसँग धेरैपटक कुरा गरेको छु । तपाइर्ंहरूको आतंक उनीहरूमा पनि छ ।
अहिले तपाइर्ंहरू हामी घट्यौं भन्नुहुन्छ । म त बढेको देख्छु । बढ्यो हाम्रो सेना । यही हो रणनीति र कार्यनीति भनेको नै । हामी कति थियौ‌ ? साँच्चै भन्ने हो भने ७ र ८ हजारको बीचमा थियौं । प्रमाणीकरण ७ हजार राखेको भए ४ हजार हुन्थ्यो । ३५ हजार राखिदिएपछि २० हजारमा आयो । यही हो साँचो कुरा अरूलाई पो भन्न भएन । हाम्रो नेतृत्वले बुद्धि पुर्‍याएर ७ हजारलाई २१ हजार बनायो । तपाइर्ंहरू नियमित सेना भइसक्नुभयो । बाहिर वाईसीएलको संरचना बनाएका छौं । त्यहाँ पनि हजारौं छन् ।
प्रमाणीकरण नभएकाहरूलाई बर्बाद हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि छ । त्यसको व्यवस्था गरिन्छ । क्रान्ति पूरा भएको छैन । जताबाट पनि शक्ति सबै हाम्रो हातमा आयो भने सबै ठीक हुन्छ । आउँदै आएन भने फेरि क्रान्तिमा जान्छौं । सबै हाम्रो हातमा आयो भने उतापट्टकिो सेनामा लगेर फिट गर्ने हो । नत्र हाम्रो अर्को संरचनामा ल्याएर फिट गर्ने हो । फेरि तालिम दिएर अघि बढ्ने हो ।
गणतन्त्र पास भइसकेपछि मेरो अमेरिकाको एक बुद्धिजीबीसँग फोनमा कुरा भएको थिया । अमेरिकन बुद्धिजीबीमा, त्यहाँ सिनेटरहरूमा माओवादीले सबै नेपाल लगिसक्यो, अब नेपाललाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने ठूलो चर्चा चलेको रहेछ किनभने, माओवादीकै कारण गणतन्त्र पनि पास भयो भनेर संसारभरि हल्ला भयो । त्यसको राजनीतिक फाइदा त माओवादीलाई नै भयो । यसलाई जित नै मान्नुपर्छ ।
सहिद परिवारलाई राहत नभएसम्म, बेपत्ता सार्वजनिक नभएसम्म, घाइतेको उपचार नभएसम्म र शिविरको तलब भत्ता सुविधा नभएसम्म हामी चुनावमा जाँदैनौ‌ भनेका थियौ‌ । विश्वभरि यो कुराचाहिँ मजाले स्थापित भएको छ । यो बडो मजा भएको छ । यो हामी माथि पर्ने तर्क भएको छ । प्याकेजमा माघ महिनाभरि सहिद परिवारलाई राहत दिने निर्णय भएको छ । क्षतिपूर्ति दस लाख नै हो, अहिले राहतस्वरूप एक लाख मात्र जाने हो । एक लाख दिँदा पनि सहिद परिवारलाई डेढदेखि दुई अर्ब जान्छ । एक लाख नगद गाउँका गरिब किसानलाई जानु भनेको ठूलो कुरा हो । साठी करोड शिविरमा जान्छ । यो पैसामात्र होइन राजनीति हो । सहिद परिवारलाई त्यो पैसा बाँड्ने क्रममै हामी माथिबाटै कार्यक्रम तय गरेर आमसभाहरू गर्छौर्ं ।
यसरी कार्यक्रम बनाएर जिल्लाजिल्लामा गयौं भने चुनावको होइन विद्रोहको तयारी हुन्छ । जनताको र हाम्रो बिग्रन लागेको सम्बन्ध यस्तोसँग सुदृढ हुन्छ । पार्टी आयो भन्ने हुन्छ । हाम्रै हो पार्टी भन्ने हुन्छ । हामी पनि यो एक लाखले पुग्दैन अर्को नौ लाख चाहिन्छ भन्छौं जनतामा गएर । अब नौ लाखका लागि लड्नुपर्छ भनेर गाउँगाउँमा भाषण गर्दै हिँड्छौं । सहिद नभएको त गाउँ नै छैन देशभरि । भनेपछि देशभरि झक्झकाउन सकिन्छ ।
यतापट्टी शिविरमा ६० करोड गयो भने, विद्रोहको तयारीका लागि हामीलाई पैसा चाहिन्छ । मैले तपाईंहरूलाई भन्छु नि ट्रकमा आउँछ है भनेर । त्यो (हतियार) ट्रकमा आउनलाई पैसा चाहिन्छ । कसैले सित्तैमा दिन्नन् । साठी करोड गयो भने तपाईंहरूले अलिकति लिए पनि बीस करोड त पार्टीलाई आयो । बीस करोडले तयारी गर्‍यो भने विद्रोहको ठूलो तयारी हुन्छ । पैसा टन्न छ भने राम्रो विद्रोहको योजना हुन्छ । रूपमा हेर्दा त पार्टी फेरि सम्झौतामा गयो भन्ने देखिएला तर गहिरो ढंगले हेर्दा पार्टी कति गम्भीर हिसाबले विद्रोहको तयारीमा लागेको रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ ।
अहिले हामीले चुनाव चुनाव भनिरहेका छौ‌ । अस्तिसम्म चाहिँ हामी चुनाव भाँड्ने र अरू चुनावका पक्षधर देखिन्थे । जनतालाई भ्रम हुन्थ्यो । अहिले तपाइर्ंहरूसँग ढुक्कले कुरा गर्नुको पनि कारण छ । आजै कांग्रेसका एक नेताले चुनाव हुनसक्दैन भनेका रहेछन् । चुनाव नगर्ने तयारी अब कांग्रेसले गर्दै छ । अब हामीले अझ चुनाव भन्नुपर्छ । दुई तीन महिना हामी संविधानसभाबाहेक दायाँबायाँ हेर्दै नहेर्ने जस्तो देखिनुपर्‍यो । तपाईंहरू शिविरमा संविधान भन्ने, हामी बाहिर भन्ने । अब सहिद परिवारलाई पैसा बाँड्न पनि संविधानसभाका लागि बाहिर हिँड्ने कुरा आयो । राहत वितरणमा पनि संविधानसभा भन्नुपर्‍यो । संविधानसभा त यिनीहरूले गर्दैनन् । यता फेरि बाम तालमेल भयो भने झनै गर्दैनन् । हो, त्यही समय विद्रोहको बेला हुन्छ ।
विद्रोह गरौ‌ भनेर विद्रोह हुने होइन । जनताको मन जितेर अब त माओवादी नै सही हो र यसको पछि लागेमात्र पार भइन्छ भन्ने पारेर मात्र विद्रोह हुन्छ । चुनाव भन्नुको तात्पर्य हेर्दै जानुभयो भने चुनावभित्र कुनै सम्झौता होइन विद्रोह छ । रूपमा सम्झौता देखिन्छ, सारमा विद्रोह छ । अर्को कुरा चुनाव चैतमा हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस् । फेरि यो कुरा बाहिर नभन्नु होला । चुनाव हुनैपर्छ भन्नुपर्छ । सबै कुरालाई चुनावभित्र हालेर सबै नेता जनताको बीचमा जानुपर्छ । तीन महिना धक्का दिन पाइयो भने पार्टीलाई बेग्लै बनाइन्छ । यसमा तपाईंहरू (लडाकु) लाई पनि सामेल गराइन्छ । उनीहरूसँग कुरा मिले सल्लाहमा नमिले पनि रोटेसनमा तपाईंहरूलाई बाहिर निकाल्ने हो । बाहिर चुनावी अभियानजस्तो देखिन्छ तर त्यो विद्रोहको अभियान हुन्छ । बाहिर भन्दै हिँड्ने होइन । भन्दै हिँड्यो भने फेरि कुरो बिग्रन्छ । बाहिर त संविधानसभाको चुनाव स्वच्छ र निस्पक्ष हुनैपर्छ भन्ने हो । नहुने थाहा पाइसकेपछि त झन् भन्नुपर्छ । जनतामा विद्रोह भनेको घुसेको छैन । संविधानसभा भनेको पार्टी किन टाढिँदैछ भन्ने परेको छ । संविधानसभा भन्दै हिँडेपछि विद्रोहको कुरा पनि घुस्छ । चुनाव भयो भने फेरि हामी भाग्ने भनेको पनि होइन । उनीहरूले नै हुन दिँदैनन् । हामीले जित्नेजस्तो देखे उनीहरू (अरू दलहरू) भारत अमेरिकासँग मिलेर चुनाव हुन दिँदैनन्, उनीहरूले जित्ने देखे हामी चुनाव हुन दिँदैनौं ।
एमालेले एकताका चुनाव चुनाव भन्दै लाखे नाच नाच्दै हिँडेको थियो । मैले एमालेका नेताहरूलाई यसरी नउफ्र तिम्रा खुट्टा भाँच्छौं भनेपछि थान्को लागेका छन् । खुट्टा भाँच्न त सकिन्छ नि सबै उम्मेदवारका । सुरक्षा त छैन नि । चुनाव भइहाल्यो भने पनि हामी जित्छौं । संविधानसभामा गएर फेरि लडाइँ लड्ने हो । हामी जितेर माथि परिसकेपछि त आफ्नै हिसाबमा लगेको लग्यै गरिन्छ । यो कार्यनीति पनि विद्रोहकै हो । हामीले चुनावभित्र सबै चिज जोड्न खोजेका छौं ।
सेना समायोजन संविधानसभा अगाडि हुँदैन । वाम गणतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीको तालमेल भनेका छौ‌ नि, त्यत्तिकै भनेको होइन । अगतिलासँग पनि तालमेल गरेपछि हाम्रो बहुमत हुन्छ । हामी भाले भइसकेपछि (माफ गर्नुहोला हामीले जितिसकेपछि) र हाम्रो हात माथि परिसकेपछि त नियम फेरिदिन्छौं नि । अहिलेको प्रमाणीकरण पनि हामी मान्दैनौ‌ । उनी (नेपाली सेना) लाई एक लाखबाट पचास हजारमा झार्‍यौ‌ भने हाम्रो पनि बीसबाट दस हजार त राख्न सकिन्छ । अस्ति भर्खर कटवाल (नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति) ले तीन हजारमात्र माओवादी सेना समायोजन गर्ने हो भने एक लाख सेना खत्तम हुन्छ भनेको छ । हाम्रो दस हजार सेना त्यहाँ पस्ने र अझ हामी माथि परेको बेला समायोजन गर्ने हो भने पूरै सेना माओवादीमय हुने मलाई विश्वास छ । अहिल्यै त नेपाली सेना झन्डैझन्डै माओवादीमय हुन खोजेको छ, अलिकति ताल मिल्यो भने अहिल्यै हुन्छ । हाम्रो सेना त राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित छ । हाम्रो सेनामा त विचार, सोच, नीति छ, संसारलाई कता लाने भन्ने । त्यहाँ त छैन नि, बुट बजार्नेबाहेक केही हुन्न । बुट बजार्नेलाई त चेतना भएकाले खाइहाल्छ नि । संविधानसभा भयो भने पनि हामी जित्छौं र हाम्रो अनुकूलको समायोजन हुन्छ । संविधानसभा भएन भने हामी पहिला सत्ता कब्जा गर्छौ र समायोजन हुन्छ ।
हामीले एउटा, एउटा गरेर समायोजन गर्नुहुन्न भनेका छौं । यो कुरा स्पष्ट छ । हाम्रो छुट्टै एकाइ र कमान्ड हुन्छ । व्यावसायिक तालिमका लागि पनि हामी पाँच, सात वर्ष छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पनि राजनीतीकरण गर्नुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रीकरण भनेको छ नि, त्यो भनेको राजनीतीकरण गर्ने भनेको हो । त्यसका लागि पनि पाँच, सात वर्ष लाग्छ । युनिटवाइज बस्ने भन्ने कुरा त बुझ्नुभएकै होला । यसरी बस्दा कसैले भोलि धोका दियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ ।
This entry was posted in संक्रमणकाल and tagged नेपाली सेना, माओवादी on May 6, 2009 by Dinesh Wagle.
← Heat and Dust of Delhi India and Indians: Friends of Two Different Kinds →
2 thoughts on “‘युद्ध छाडेका छैनौं…जनसेनाको स‌ख्या बढायौ‌‌’; प्रचन्ड”
sudiparyal May 8, 2009 at 3:57 pm
पुरानो कुरा अहिले उठाउनुको तुक छैन
माओबादीले युद्ध गरेकै सत्ता कब्जा गर्न त हो नि
माओबादीलाइ नै सरकार चलाउन दिउं र बिरोध नगरौ अनि देश कति भिकास हुन्छ हेरौँ
Manoj Guragai November 2, 2009 at 10:10 am
LeaveaReply to Manoj Guragai Cancel reply